Afayeenka Barlamaanka Sweden oo Mar kale Magdalena Andersson u Wakiishay dhismaha Dowlad Cusub
HomeWararka CaalamkaAfayeenka Barlamaanka Sweden oo Mar kale Magdalena Andersson u Wakiishay dhismaha Dowlad Cusub
November 26, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Afhayeenka baarlamaanka Andreas Norlén ayaa u wakiishay guddoomiyaha xisbiga SPD Magdalena Andersson mar kale inay soo dhisto dowladda. Waxa uu sheegay in Kalfadhi cusub oo loogu codeynayo Ra’iisul Wasaaraha la qaban doono Isniinta soo socota.
Andersson ayaa codsatay in is casisho, qiyaastii 8 saacadood ka dib markii baarlamaanka u doortay haweeneydii ugu horeysay ee ra’iisul wasaare ka noqota Sweden.
Shalay ayay xukuumaddu ku guul-darraysatay inay miisaaniyadeeda meel-mariso baarlamaanka, halka ay ku guulaysteen miisaaniyada garabka midig ee xisbiyada Moderaterna, Christian Democrats iyo Sverigedemokraterna (SD) taasoo keentay in xisbiga deegaanku ka baxo xukuumadda la dhisayo, isagoo ku nuux-nuuxsaday. kama qayb qaadan doonto hirgelinta miisaaniyada uu ka gorgortamayo xisbiga garabka midig ee SD.
Isagoo ka hadlayay qalalaasaha siyaasadeed ee Sweden shalay ka dhacay, Andreas Norlén wuxuu dhaleeceeyay xisbiga deegaanka. Shirjaraa’id oo uu wakhti hore qabtay waxa uu ku yidhi, “Haddii aan ogaan lahaa in xisbiga deegaanku uu u baahan yahay guusha miisaaniyada dawladda si uu uga qayb galo dawladda, ma aanan magacaabin Magdalena Andershon todobaadkii hore, waxaanan sugi lahaa codka. Miisaaniyaddu inta au dhammaanayso.”
“Waxaan aad uga xumahay qalalaasihii shalay ka dhacay siyaasadda Sweden,” Andreas Norlén ayaa hadalkiisa ku daray. Waxay ahayd wax laga fogaado.”
Sidoo kale haddii ay dhacdo in Baarlamaanka uu ku waayo ansixinta Baarlamaanka maalinta Isniinta ah ee soo socota, waxaa Guddoonka Baarlamaanka uu yeelan doonaa wadatashi cusub oo uu ku soo magacaabi doono hogaamiye xisbi kale.
Hadii Andersson ku guulaysto waxa ay hogaamin doontaa xukuumad hal xisbi ka kooban oo ay tahay in ay fuliso miisaaniyada mucaaradka ilaa laga gaadhayo doorashada guud ee September sanadka soo socda.